China sy ny orinasa vita amin'ny kofehy tsy azo sakanana | Weirui
1. Nylon Monofilament Monofilament, ny sentetika, ny soture tsy azo sakanana, ny loko mainty, ny manga na ny tsy mihosotra. Nahazo ny extrusion ny polyamide 6.0 sy 6.6 miaraka amin'ny savaivony varingarina mitovy. Ny fanehoan-kevitra amin'ny tisu dia kely. Nylon dia fitaovana tsy azo tsindrim-peo, rehefa mandeha ny fotoana, voahodidin'ny mpampitohy tis ...
Monofilament, sentetika, suture tsy azo tsaboina, loko mainty, manga na undyed.
Nahazo ny extrusion ny polyamide 6.0 sy 6.6 miaraka amin'ny savaivony varingarina mitovy.
Ny fanehoan-kevitra amin'ny tisu dia kely.
Nylon dia fitaovana tsy azo tsindrim-peo, rehefa mandeha ny fotoana, dia voahodidin'ny tavy mpampitohy.
Fantatra fa mihena ny habetsahan'ny kofehy, manodidina ny 10% isan-taona noho ny fahatapahan'ny rohy simika amin'ny alàlan'ny hetsika hydrolytic.
Kaody miloko: marika maitso （PANTONE 360C）.
Ampiasaina mazàna rehefa mifanandrina amin'ny sela amin'ny fandidiana neurolojika, ophthalmic ary plastika.
Fiandohana sentetika （materisy manta kalitao） INERT.
Monofilament (gite milimetatra fanamiana).
Fanohanana fiarovana ny fanjaitra.
Fanjaitra maranitra maranitra ho an'ny fandidiana tena manam-pahaizana manokana (Ophthalmology, Plastika fandidiana).
General, Gynecology, Obstretrics, Ophthalmic, Neurology, Peripheral micro-vascular Surgery, Orthopedics ary General Surgery.
Ny dokotera mpandidy dia afaka matoky amin'ny fomba fiasa izay amboarina ny tadin'ny kofehy tsy mitongilana tokana manana tanjaka avo, raha toa ka fantatry ny mpandidy ny toetra sy ny tombony ary ny fetran'ny fanjairana ary mampihatra fanao amin'ny fandidiana tsara.
Suture tsy mitongilana, tsy azo tsofina, monofilament.
Tafiditra ao anaty filament miaraka amina savaivony fehezin'ny solosaina.
Ny polypropylene in vivo dia miorina tsara; mety amin'ny fanatanterahana ny tanjony amin'ny maha-mpanohana maharitra azy, nefa tsy manimba ny heriny mihoampampana.
Kaody loko: marika manga （PANTONE 652C）.
Matetika ampiasaina hiatrehana tisu any amin'ny faritra manam-pahaizana manokana. Ny fomba fitsaboana cutular sy kardiojika dia anisan'ny manan-danja indrindra.
Plastodeformation tsara ..
Tsy azo entina.
Fanoherana ny fanondrotana miverimberina.
Fanjaitra premium tena maranitra.
Fanjaitra manokana ampiasaina amin'ny fandidiana kardia (jereo ny tatitra momba ny fanjaitra).
Fandidiana kardiojika, fanavaozana plastika, fandidiana cuticular, Ginecology ary Obstetretics, Orthopedics ary fandidiana ankapobeny.
Azon'ny mpampiasa ampiasaina amin'ny fomba azo antoka ihany koa amin'ireny fombafomba ireny izay anoroana kofehy tokana tsy azo sakanana sy tokana amin'ny tanjaka avo lenta, raha toa ka fantatry ny mpampiasa ny toetra, ny tombony ary ny fetran'ity fitaovana ity ary mampiasa fomba fanao amin'ny fandidiana tsara.
3. Volom-bolo polyester
Synthetic, non-absorbable, multifilament,
Loko maitso na fotsy.
Polyester mitambatra terephthalate misy na tsy misy fonony.
Noho ny fiaviany sentetika tsy azo tsaboina dia manana réactabilité tavy farafaharatsiny izy io.
Nampiasaina tamin'ny fifangaroana sela noho ny tanjaka mampatanjaka azy.
Kaody miloko: marika maitso （PANTONE 3288C）.
Ampiasaina matetika amin'ny fandidiana manokana miaraka amin'ny kardia sy opthtalmika noho ny fanoherany ny famolahana matetika.
Fanoherana ny famerenana miverimberina.
Multifilament mirandrana ..
Izy io dia aseho amin'ny fomba fiasa izay anolorana ny fanjairana ny fehiloha vita amin'ny sentetika sy ny tsy azo entina. Anisan'izany ny: fandidiana aretim-po, fandidiana opthalmogika ary fandidiana ankapobeny.
Azon'ny mpampiasa ampiasaina amin'ny fomba azo antoka ihany koa amin'ireny fomba fanao ireny izay anoroana ny zaitra tsy azo sakanana, marolafy ary mitambatra amin'ny tanjaka avo lenta, raha toa ka fantatry ny mpampiasa ny toetra, ny tombony ary ny fetran'ity fitaovana ity ary mampiasa fomba fanao amin'ny fandidiana tsara.
Sitroka voajanahary, tsy azo tsofina, multifilament.
Loko mainty, fotsy ary manga.
Nahazo tamin'ny cocoon an'ny kankana landy Bombyx Mori I.
Mety ho antonony ny fihetsika azo avy amin'ny tavy.
Voatazona mandritra ny fotoana ny fihenjanana na dia mihena aza izany mandra-pahatongan'ny famoahana ny tavy.
Kaody miloko: marika manga （PANTONE 2995C）.
Matetika ampiasaina amin'ny fifandonana na fifamatorana raha tsy amin'ny fomba urologika. Mampiavaka:
Akora voalohany kalitao.
Multifilament misy kofehy ..
Loko mainty (kofehy miaraka amin'ny silika).
Fandidiana ankapobeny, Gastroentelorogy, Opthalmology, Gynecology ary Obstretrics.
Ny mpandidy dia afaka mampiasa azy io amin'ireny fomba fanao ireny, izay anoroana tavy tsy azo sintomina, multifilament ary synthetic amin'ny tanjaka avo lenta, raha toa ka fantatry ny mpampiasa ny toetra, ny tombony ary ny fetran'ity fitaovana ity ary mampiasa fomba fanao amin'ny fandidiana tsara.
Monofilament, vy tsy misy fangarony, firaketana tsy azo tsentsina.
Ny fihetsika mamaivay dia kely.
Maharitra ny tanjaka.
Kaody miloko: marika volondavenona （PANTONE 7539C）.
Ampiasaina matetika amin'ny fomba fitsaboana orthopedika ao anatin'izany ny fandidiana fandidiana fanidiana.
Hery matanjaka avo lenta
Mahazendana sy mora volavolaina.
Volavola manokana fanjaitra tsy mampivadi-po.
Raha fantatry ny mpampiasa ny toetrany, ny tombony ary ny fetran'ny famafazana vy tsy misy fangarony, ary raha mizatra amin'ny fomba fanao amin'ny fandidiana tsara izy, ny fampiasana an'ity vokatra ity dia ampy ho an'ny fomba fitakiana mitaky fitaovana tena mahazaka, ohatra amin'ny Orthopedics, Fikatonan'ny Sternum, sns. Ny knot dia mitaky teknikan'ny knotting manokana amin'ny Stainless Steel fandidiana.
Teo aloha: Kitapo fanampiana vonjy taitra ho an'ny fiara mora vidy - karatra anarana-fehin-tanana - WeiRui
Manaraka: Suture azo sakanana